घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » गेस्टपोस्ट » एक निष्पक्ष क्रेडिट स्कोर के मतलब छ?
प्रत्येक अमेरिकी नागरिक जो उधारो प्रयोग गरीएको छ फेयर इसहाक निगम, वा FICO द्वारा एक अंक तोकिएको छ। यसको मापन को श्रेणी मा एक "उचित ”ण" को रूप मा जानिन्छ। यो 580-669 दायरा समेटेको छ। यदि तपाइँ ब्रेकडाउन मा हेर्नुहुन्छ, तपाइँ देख्नुहुनेछ कि यो स्तर "राम्रो क्रेडिट" को लागी नीच छ। हो, एक निष्पक्ष कुल सबैभन्दा राम्रो परिणाम होईन। किन उपभोक्ताहरु यसलाई प्राप्त, र तपाइँ कसरी आफ्नो स्तर अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाइँको स्कोर एक महत्वपूर्ण सूचक हो। यो संस्थाहरु को विभिन्न प्रकारहरु द्वारा प्रयोग गरीन्छ आवेदकहरु साख मा आधारित आवेदकहरु तुलना गर्न।
तपाइँ पक्का हुन सक्नुहुन्छ तपाइँको कुल उधारकर्ताहरु, बीमा कम्पनीहरु, जमीन्दारहरु, र भर्तीकर्ताहरु द्वारा विचार गरीन्छ।
यो जीवन को धेरै क्षेत्रहरु लाई प्रभावित गर्दछ, त्यसैले FICO मापन मा एक उच्च स्थिति धेरै ढोका खुल्छ।
कसरी स्कोर काम
VantageScore जस्तै, पद्धति ३०० देखि 300५० को मापन मा आधारित छ। यो "धेरै गरीब" र "निष्पक्ष" पूर्व "राम्रो", "धेरै राम्रो" र "असाधारण" को साथ धेरै खण्डहरुमा विभाजित छ। आठ सय सबै भन्दा राम्रो शर्तहरु र सेवाहरु को उपयोग गर्न को लागी पर्याप्त छ। राष्ट्रव्यापी ब्यूरो द्वारा संकलित रिपोर्ट मा आधारित छ।
विशेषज्ञ ब्यूरो को अनुसार, लगभग १%% अमेरिकी नागरिकहरु को श्रेणी मा आउँछन्। यी उपभोक्ताहरु लाई पैसा बचाउन को लागी आफ्नो स्थिति मा सुधार गर्नु पर्छ र संस्थाहरु को नजर मा अधिक विश्वसनीय बन्नु पर्छ। यो मर्मत वा स्कोर को पुनर्निर्माण द्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ, रिपोर्ट को शुद्धता मा निर्भर गर्दछ।
मर्मत झूटो हानिकारक जानकारी हटाउन औपचारिक विवाद मा आधारित छ। पछिल्लो जाँच गर्नुहोस् क्रेडिट repair.com समीक्षा क्रेडिट मा फिक्स्ड हेर्न को लागी यो कसरी काम गर्दछ। पुनर्निर्माण FICO मूल्यांकन को विभिन्न घटक, जस्तै कुल ofण को आकार संग काम गरीरहेको छ। रणनीति लक्ष्य मा निर्भर गर्दछ - उदाहरण को लागी, तपाइँ एक उच्च आवश्यकता हुन सक्छ क्रेडिट स्कोर एक कार किन्नको लागी.
"निष्पक्ष" श्रेणी बाट आवेदकहरुलाई शंकाको साथ हेरिन्छ। स्तर शर्तहरु र क्रेडिट सेवाहरु को पहुँच लाई प्रभावित गर्दछ, यो एक ऑटो loanण, बंधक, वा क्रेडिट कार्ड हो। पदानुक्रममा तपाइँको स्तर कम - उच्च ब्याज दरहरु। यदि तपाइँ अनुमोदन प्राप्त गर्नुहुन्छ, उधारो माथि बाट कसैको लागी भन्दा महँगो छ।
राम्रो अंक को लाभ
प्रणाली मा बढ्दो तपाइँको वित्तीय भविष्य को लागी महत्वपूर्ण छ। सुधार लाखौं मानिसहरु को लागी आकर्षक छ। यहाँ केहि फाइदाहरु छन्।
विभिन्न प्रकारका सेवाहरुमा ब्याज दर कम हुनेछ, जसको मतलब उधारो सस्तो हुनेछ।
कम दर संग कम भुक्तानी आउँछ। हरेक महिना दायित्व पूरा गर्न सजिलो हुनेछ।
तपाइँ शून्य ब्याज, सौदा, र पुरस्कार सहित कार्ड मा राम्रो स्थिति अनलक हुनेछ।
एक अपार्टमेन्ट वा घर भाडामा लिनु सजिलो हुनेछ, किनकि जमिन्दारहरूले तपाइँलाई एक अधिक जिम्मेवार भाडावालको रूपमा बुझ्नेछन्।
किन स्कोर गिरावट
कुल रिपोर्ट मा आधारित छ, के वास्तव मा यो असर गर्छ? FICO पद्धति तपाइँको उधारो व्यवहार को पाँच पक्षहरु लाई विचार गर्दछ। ती मध्ये प्रत्येक तपाइँको स्थिति मा एक विशिष्ट प्रभाव छ। यहाँ ब्रेकडाउन छ:
पूर्व भुक्तानी (35%);
समग्र बकाया रकम (30%);
रेकर्ड को उमेर (15%);
नयाँ खाताहरु (१०%);
क्रेडिट मिक्स (१०%)।
ध्यान दिनुहोस् कि फरक मूल्यांकन विधिहरु बिभिन्न कम्पोनेन्टहरुमा भर पर्छन्, यद्यपि FICO र VantageScore धेरै समान छन्। सबैभन्दा सामान्यतया, प्रतिकूल योग गरीब बजेट को परिणाम को रूप मा मनाईन्छ। उदाहरण को लागी:
तपाइँ विगतमा भुक्तानी छुटाउन सक्नुहुन्छ। यो जानकारी को सबैभन्दा हानिकारक प्रकार हो, यो स्कोर को सबैभन्दा ठूलो हिस्सा परिभाषित गर्दछ। एक नियम को रूप मा, उधारकर्ताहरु ढिलो भुक्तानी को मिति को 30 दिन पछि रिपोर्ट।
अन्ततः, संग्रह, चूक, दिवालियापन, र नागरिक न्याय मा नतिजा तिर्न असफलता, जो years बर्ष को लागी कुल धूमिल (अध्याय bank दिवालियापन १० बर्ष सम्म रहिरहन्छ)।
तपाइँ तपाइँको सीमा को धेरै धेरै प्रयोग गरीएको हुन सक्छ। अधिकतम क्रेडिट कार्ड एक भयानक विचार हो, यो १००%को उपयोग अनुपात ल्याउँछ। यस बीच, विशेषज्ञहरु तपाइँको कुल सीमा को १०% भन्दा बढी को उपयोग को सिफारिश।
यदि तपाइँ क्रेडिट संग थोरै अनुभव छ, तपाइँको इतिहास धेरै छोटो छ।
उधारकर्ताहरु जो केवल एक वा दुई प्रकार को सेवाहरु को उपयोग गरीब एक creditण मिश्रण छ। यो कारक, जो परिणाम को १०% को लागी जिम्मेवार छ, दायित्वहरु को विभिन्न प्रकारहरु को प्रबंधन को लागी तपाइँको क्षमता झल्काउँछ।
तपाइँ धेरै धेरै acquiredण प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाइँ एक छोटो अवधि भित्र धेरै धेरै आवेदन पेस गर्न सक्नुहुन्छ। दर किनमेल अनुमति छ, तर उधारो को विभिन्न प्रकार को अनुरोध एक नकारात्मक प्रभाव छ, यो तपाइँ नगद को लागी कसैलाई हताश जस्तै बनाउँछ।
म कसरी मेरो क्रेडिट स्कोर सुधार गर्न सक्छु?
यदि तपाइँको स्कोर अनुचित ढंगले पतन भएको छ, रिपोर्टि errors त्रुटिहरु आफैलाई ठीक गर्नुहोस् वा विशेषज्ञहरु भाडामा लिनुहोस्। मर्मत निष्पक्ष क्रेडिट रिपोर्टि Act अधिनियम को शर्तहरु मा आधारित छ, जो ब्यूरो लाई कुनै पनी जानकारी उनीहरु प्रमाणित गर्न सक्दैनन् हटाउन बाध्य छन्। एक विवाद खोल्न को लागी, तपाइँ प्रमाण खोज्न र तपाइँको दावी ब्याकअप गर्न कागजातहरु को प्रतिलिपि बनाउन को लागी आवश्यक छ। A टेम्पलेट उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण ब्यूरो को वेबसाइट मा उपलब्ध छ।
वैकल्पिक रूपमा, तपाइँको राज्य मा एक मर्मत कम्पनी खोज्नुहोस्। पेशेवरहरु तपाइँको रेकर्ड मा विसंगतिहरु पाउनुहुनेछ, प्रमाण तयार पार्नुहोस् र तपाइँको तर्फ बाट औपचारिक रुपमा उनीहरुलाई विवाद गर्नुहोस्। यो समय बचाउँछ, तपाइँ कानून नेविगेट वा औपचारिक पत्राचार संग सम्झौता गर्न को लागी छैन। प्रत्येक विवाद पत्र एक आन्तरिक अनुसन्धान कि ३० दिन को लागी रहन्छ। यदि ब्यूरो परिवर्तन स्वीकार गर्दछ, तपाइँ नि: शुल्क संशोधित रिपोर्ट को एक प्रति प्राप्त गर्नुहुनेछ।
जब निष्पक्ष स्कोर सही छ, त्यहाँ फिक्स गर्न को लागी केहि छैन। यसको सट्टा, तपाइँको उधारो ढाँचा मा हेर्नुहोस् FICO को कुन तत्वहरु तल कुल तान्नुहोस्। उदाहरण को लागी, तपाइँ केहि ब्यालेन्स तिर्न, सीमाहरु लाई विस्तार गर्न, एक नयाँ कार्ड प्राप्त गर्न, वा एक अधिकृत प्रयोगकर्ता बन्ने द्वारा उपयोग को कम गर्न को लागी आवश्यक हुन सक्छ। बिस्तारै, तपाइँको स्थिति सुधार हुनेछ, सेवाहरु को विभिन्न प्रकारहरु को लागी राम्रो शर्तहरु अनलक।